सबैभन्दा प्रसिद्ध वकिल रूस मा: सूची रोचक तथ्य र उपलब्धिहरू
एक व्यावसायिक स्वतन्त्र सल्लाहकार मा कानूनी मामिलामा प्रश्न — यो स्थिति कि आधुनिक वकिल छ । तिनीहरूले मालिकको को तथाकथित मुक्त पेशा जस्तै, निजी चिकित्सकहरु वा पत्रकार हो । वकिल हकदार छन् रक्षा गर्न स्वतन्त्रता र मानव अधिकार । पेशा जटिल छ र आवश्यकता देखि आफ्नो मालिक मात्र तेज कानूनी ज्ञान, तर पनि अस्तित्व को एक कोर को नैतिकता छ । सफलता हासिल छैन सबैलाई छ । त्यसैले तिनीहरू को हुन् — सबैभन्दा प्रसिद्ध वकिल. एक सूची र रोचक तथ्य बारे मा सबै भन्दा राम्रो घरेलू वकिल तपाईं पाउनुहुनेछ थप. हेनरिक छ, एक राम्रो-योग्य वकील को रूसी संघ को एक स्नातक, मास्को व्यवस्था संस्थान.
अब, को उमेर मा, यो देखिन्छ कि उहाँले हराएको छैन एक बिट को एक, विगतमा र जारी आफ्नो मानव अधिकार गतिविधिहरु संग ठूलो उत्साह छ । जीपी छलफल छ छैन मात्र सबैभन्दा प्रसिद्ध वकिल रूस मा, तर पनि सबैभन्दा अत्यधिक भुक्तानी । असाधारण अवस्थामा, यो काम मुक्त लागि. उहाँले स्वर्ण पदक प्रदान गरिएको थियो. लागि विकास गर्न आफ्नो योगदान को रूसी कानूनी पेशा, साथै सार्वजनिक पहिचान मानार्थ चिन्ह छ । को सूची मा आफ्नो ग्राहकहरु: प्रकाशन हाउस, पत्रिका, परिवार को ए, गायक र संगीतकार, बैंक र सिटीबैंक. अदालतमा हाजिर रूपमा रक्षक को एल, अभिनेता, पूर्व रूसी रक्षा मन्त्री ए, व्यवसायी ए. हेनरी वकील को उच्चतम परीक्षण, उल्लेखनीय वकील. यो एक गुणवत्ता छ कि अब, दुर्भाग्य, दुर्लभ — यो उच्चतम कानूनी संस्कृति । उहाँले निःस्वार्थ समर्पित गर्न आफ्नो पेशा, र अझै पनि नजिकै आत्म-विडंबना, जो मेरो राय मा छ बस आवश्यक एक मानिस लागि, भन्छन् आफ्नो सहयोगी हेनरी.
र हामी बताउन उहाँलाई बारेमा थप
हेनरी — मा चिरपरिचित, सम्मान वकील को रूसी संघ र पूर्व अध्यक्ष, को पट्टी को मास्को. उहाँले प्राप्त आफ्नो व्यावसायिक शिक्षा मा पहिलो केन्द्रीय एशियाली राज्य विश्वविद्यालय, ताशकहरुट, र त्यसपछि मा कजाख राज्य विश्वविद्यालय. उहाँले एक उम्मेदवार को विज्ञान र एक पूर्व प्रोफेसर, को बार मा मास्को राज्य व्यवस्था अकादमी, लेखक को बारे दुई सय प्रकाशनहरू को क्षेत्र मा आपराधिक व्यवस्था र प्रक्रिया हो, सामान्य सिद्धान्त को व्यवस्था, अपराध हो । उहाँले सम्मानित थियो मानार्थ बिल्ला सार्वजनिक पहिचान र सुन पदक । (अध्यक्ष र प्रसिद्ध वकील को रूस). सुरु आफ्नो व्यावसायिक को स्थिति अन्वेषक । मा, उहाँले बायाँ पट्टी लागि. अनुसार वकिल, आफ्नो संक्रमण थियो संग जोडिएको एक ठूलो आपराधिक मामला विरुद्ध मास्को पल्ट एसोसिएशन. तिनीहरूले को आरोप थियो भडकाने, कपटपूर्ण, र हेनरी, पहिले नै नाम मा कानुनी समुदाय, आमन्त्रित थियो रूपमा एक स्वतन्त्र विशेषज्ञ को पक्ष मा रक्षा । कारण उच्च व्यावसायिकता भए सबैभन्दा प्रसिद्ध वकील को रूस औं शताब्दीमा छ । आफ्नो ग्राहकहरु थिए: राष्ट्रपति को रूसी संघ बोरिस राष्ट्र, राजनेता, री, ला, र अरूलाई. यूरी छ विश्वविद्यालय, उम्मेदवार को कानूनी विज्ञान. काम थाले मा कार्यालय समर्थित, को अभियोग मा अनुपम लागि सोभियत संघ को. पट्टी मा देखि, उहाँले रूपमा काम गरे आयोजक र निर्माता को मास्को पल्ट एसोसिएशन अधिवक्ता कोठामा । उहाँले माहिर मा मुख्य आपराधिक अवस्थामा छ । उहाँले एक उम्मेदवार को विधिशास्त्र, एक सहायक प्रोफेसर, को एक सदस्य विशेषज्ञ परिषद्को तयारी छ, को लागि एक पुस्तक प्रकाशन । बीचमा आफ्नो ग्राहक, व्यवसायी. मेरो काम म सधैं द्वारा निर्देशित गरिएको पुरातन रोमन नारा: लामो बाँच्न न्याय पनि भने, यो संसारमा असफल । (फिएट), भन्छन् युरि. प्रतिनिधि मा उच्चतम न्यायिक उदाहरणहरु को यो रूसी संघ को सरकार मिखाइल. सम्म थियो एक राम्रो-ज्ञात आधुनिक वकील को रूस. स्वेच्छा अख्तियार मा संग जडान गर्न संक्रमण लोकसेवा. शिक्षित मा सबै-संघ पत्र, एक डाक्टर को विधिशास्त्र, एक वास्तविक राज्य सभासद को पहिलो वर्ग, सम्मान कलाकार को रूसी संघ, एक विशेषज्ञ मा टेलिभिजन क्लब के. कहाँ । जब, को लेखक, पुस्तक र सन्दर्भ पुस्तकहरू । उहाँले सम्मानित थियो यो क्रम मेरिट को लागि जन्मभूमि (शताब्दीका), को क्रम सम्मान, सुन पदक ।. मा लेखकहरूले मामला मा उहाँले रूपमा काम गरे एक वकील लागि. रूपमा काम, एक वकील लागि सामान्य अखबार, सिर्जना र लाग्यौं मा पहिलो निजी व्यवस्था दृढ मा, रूस. अर्को मा सूची को राम्रो-ज्ञात वकील को रूस -अलेक्जेन्डर. एक धेरै रोचक जीवनी । उहाँले अध्ययन मा, तर समाप्त गरेनन्, यो त गर्न उत्प्रेरित गर्न फ्रान्स आफ्नो आमा, जहाँ उहाँले स्वामित्व आफ्नै रेस्टुरेन्ट । उहाँले प्राप्त आफ्नो कानूनी शिक्षा मा संयुक्त राज्य अमेरिका. उहाँले फर्के रूस गर्न प्रारम्भिक मा प्राप्त, एक बाह्य उपाधि, त्यसपछि खोल्न आफ्नो पहिलो व्यवस्था कार्यालय. उहाँले विशेष मा सम्बन्धविच्छेद कार्यवाही र कर्पोरेट व्यवस्था छ । रूपमा चिनिएको एक कलेक्टर, संसारको एक संग्रह को सोभियत चिनियां माटो छ, च्याम्पियन, रूस मा मा गोल्फ र राष्ट्रपति को मास्को गोल्फ क्लब छ । लेखक को अधिक दस वैज्ञानिक काम विधिशास्त्र मा, उम्मेदवार को कानूनी विज्ञान. देखि, को रेडियो स्टेशन चाँदी वर्षा छ दिइरहनुभएको लागि योग दिमाग छ । स्टाइलिश र परिष्कृत वकिल, धेरै एसोसिएट आफ्नो उपस्थिति संग शर्लाक होम्स । पक्कै पनि, सूची को सबैभन्दा प्रसिद्ध वकिल रूस को औं शताब्दी हुनेछ अपूर्ण बिना को अध्यक्ष सार्वजनिक परिषद अन्तर्गत आंतरिक मंत्रालय को रूसी संघ अनातोली. वकील र डाक्टर को व्यवस्था, प्रोफेसर, उहाँले थियो शिक्षित मा सबै-संघ पत्राचार व्यवस्था संस्थान. उहाँले आफ्नो क्यारियर सुरु मास्को मुख्य विभाग को आन्तरिक मामिला मा पल्ट एसोसिएशन. स्थापित आफ्नै व्यवस्था कार्यालय मा विशेषज्ञता, आपराधिक र नागरिक मामिला हो । उहाँले भएको छ एक राम्रो-योग्य वकील को रूसी संघ, एक मानार्थ वकील मास्को मा, सम्मानित क्रम, सम्मान को क्रम को रूसी अर्थोडक्स चर्च, एक रजत पदक ।. प्रसिद्ध ग्राहकहरु: कूटनीतिज्ञ र लेखक प । (जासूसी मामला), प्रकाशक र सम्पादक-मा-मुख्य, पत्नी को सामान्य एल, आरोप को आफ्नो हत्या, रूसी एल र, व्यवसायी, आई, अभिनेता यू, राष्ट्र. मिखाइल छैन वकील को रूस, तर पनि एक राजनीतिज्ञ, मानव अधिकारकर्मी, राजनीतिज्ञ, पूर्व मन्त्री, प्रेस र जानकारी. उहाँले एक स्नातक को मास्को राज्य, डाक्टर को व्यवस्था छ ।. उहाँले सिकाउनुभयो सबै-संघ कानूनी पत्राचार संस्थान. उहाँले आयोजक र स्थायी नेता को अनुसन्धान विद्यार्थी प्रयोगशाला । त्यो पहिलो थियो मा सोभियत संघ मा संलग्न अनुसन्धान मा सार्वजनिक राय मा लोकतन्त्र र. धेरै प्रसिद्ध रूसी वकिल आए बीचमा देखि आफ्नो विद्यार्थीहरूको छ । हुँदा, उहाँले सामेल नागरिक सेवा । उहाँले एक प्रमुख राजनीतिक र सार्वजनिक आंकडा, एक योग्य वकील को रूस, को लेखक को भन्दा बढी सय पुस्तकहरू र लेख (मुख्यतः मानव अधिकार मा), सम्मानित क्रम को मित्रता, यूनेस्को र रूसी अर्थोडक्स चर्च पदक. प्रसिद्ध वकील को रूस संग आफ्नो गर्न छ भाग मा टीवी परियोजनाहरू । स्नातक को मास्को राज्य. मा आफ्नो क्यारियर सुरु कार्यालय, र त्यसपछि उत्प्रेरित गर्न पट्टी. मा, उहाँले स्थापित र सहयोगी — मास्को पल्ट एसोसिएशन, अध्यक्ष छ जसले हाल छ. यो एक छ सबै भन्दा ठूलो व्यवस्था कम्पनीहरु मा रूस, कब्जे ठाउँ राजस्व को मामला मा. सबैभन्दा व्यापक प्रेस मा थियो मामला को रिलीज को तीन रूसी सैनिक देखि चेचेन कैद छ । वकील गरे आवेदन गर्न राष्ट्रपति बारेमा विनिमय को दोषी चेचेन नागरिक लागि तीन, जसलाई गम्भीर घाइते भएका थिए । ए सम्मानित थियो रजत पदक ।. वकील मा भाग फिलिम मा पहिलो च्यानल मा प्रसारण संघीय न्याय. हसन — ज्ञात रूस मा वकील, राष्ट्रपति को गिल्ड को घरेलू वकिल, राष्ट्रपति को अन्तर्राष्ट्रिय संघ को रूसी भाषा बोल्ने वकिल, को रूसी अकादमी को र वकालत, प्रोफेसर, सदस्य, विज्ञान रूसी अकादमी.
को एक स्नातक, विश्वविद्यालय ।
आन्तरिक मामिला मंत्रालय, मा पल्ट देखि छ । छ, धेरै पुरस्कार सहित सुन पदक ।, आदेश को महान् पत्रुस कला, आदेश को सेन्ट ए. उहाँले मा माहिर आपराधिक अवस्थामा छ ।